Gajes ee koorsadayda ArcGIS - Geofumadas
Maarso, 2010 ArcGIS-ESRI, GIS kala cayncayn ah, safarka
Waxaan u isticmaali jiray inaan kuu sheego inaan sii wadi doono tababarka isticmaalka ArcGIS 9.3, oo leh qaab dhexdhexaad ah oo aad u weyn iyadoo ay ugu wacan tahay masaafada, waqtigeyga yar iyo shaqooyinka ardayda. Hadda waxaan kaaga tagayaa gabagabada:
Ku saabsan habka loo adeegsado:
Waxaan jeclaan lahaa in wax waliba sidaas ufududaan. Haddii ay bixin lahayd tababar, wax ku baro tusaale laga keenay Venezuela waana taas; Laakiin haddii howsha la doonayo in la hirgaliyo, dadku waa inay shaqeeyaan.
Ku saabsan shuruudaha:
Way adagtahay in la hirgeliyo mashruuc dadka leh, oo ku daraya hawl maalmeedkooda, ma haystaan ​​wakhti ku filan oo ay ku dhammaystiraan.
Tani ma noqon karto kiiska, laakiin way adkaan kartaa in la baro dadka aan runtii rabin inay bartaan.
Wax xiiso leh, iyadoon faallooyin dheeraad ah lahayn.
Ku saabsan barnaamijka:
Xaqiiqdii, Manifold waa software weyn oo si fudud loo hirgaliyo. Hadda waan u xiisay, isbeddel laba maalmood ah waxaad yeelan kartaa nidaam shaqeynaya, adigoon soo laabanin wax badan.
Waa kuwan isbarbardhig kooban:
Iibso haddii aad awooddo, haddii aadan awoodin, samee waxkasta oo aad rabto oo aadan iiga dhigin dhibaatooyinkaaga U $ 300 Dollar oo ha ka fikirin sharci darro
Foomka Geodatabase ... mmm, ArcCatalog, loogu talagalay dadka isticmaala qaar ka mid ah, laga bilaabo abuurista cusub featureclass si codsiga domain ah. The .map waa geodatabase, ka samee faylasha, sameynta sawirada, isticmaal noocyada, shaqada!
Soo qaado xogta CAD, sayniska oo dhan inta u dhexeysa kala-soocidda geesaha una sharaxan sharaabka Ku soo qaado sawir cusub, xulo, nuqul + dheji lakabka, iyo
Nadiifinta neefsiga ... ka dib markaad halgan ku jirto, ka sii fiicnaanta DGN marka hore. Codso qalabyada ganacsiga, oo xiiso leh (haddii aad awoodid)
U samee mid ka mid ah daaraha ku jira lakabka kale ... oh Ilaahay! Xulo, nuqul + dheji lakabka kale, u codso midowga xulashada, waana taas.
Lakab leh xariiqyo iyo dhibco. Taas lama ogola. Samee UN. Maxaa aan la isticmaalin?, Maxaa yeelay waxay dhacdaa marka joomatari uu yahay geesoolayaal iyo qeexitaankiisa oo aan la helin ... waxaa loo dejiyay dhibic.
Ku soo biir miiska miiska ... waxaan noqon doonnaa mashiinno! Isku xir miiska, dooran xaashida, tiirarka aad ku biirto, iyo taasi waa!
La shaqeynta kml ... haddii aysan ahayn mid, waa wax kale. Wax kale?
U dir webka ... pisto kale, kooras kale Fayl> badbaadi sida> bogga ...
Dhibaatooyinka: Haddii ay abuuraan duqa-magaaladu waxay u diidaan xanaaq, halkee ayay ka heli karaan dadka isticmaala Manifold?
Laakiin halkan ayaynu tagaynaa, maalmo faraxsan, maalmo xasiloon. Carruurtaydu waxay ku raaxeysanayaan safarka ugu dhow ee saddexda saacadood saddexda usbuuc dhammaad ah Kaliya joogsi farsamo si loo xiro xargaha.
Iyo inta kale ... fiirinta mar kale lacag la'aan.
Post Previous" Hore Qalad qaldan, Bentley V8i
Post Next … XaggeeNext »
3 Jawaabo "Gajes oo ka socda koorsadayda ArcGIS"
Qaar ka mid ah maqaallo badan ayaa i xiiseynaya,
Nacnad, ama dhadhan waa noo olhos. E waxaad u isticmaashaa software-ka, fariin qoraal ah ama cadad ah.
Turjumaadda Google, mar kale waxay badbaadisaa nolosha
Eu wejo ama contrário do ascreveu. ArcGIS waxay noqon laheyd mid ku haboon tababarkaan. (WEB não cod)
Inbadan waxay u egtahay inay halkaa ka dhaho. Ama melhor software oo aad waxbadan ka sii ogaatid. 😀